यस्ता अनेकौ रोग निको पार्छ बहुउपयोगी बोझोले। - पब्लिक समाचार
यस्ता अनेकौ रोग निको पार्छ बहुउपयोगी बोझोले।
१ महिना अगाडि / २२ पटक हेरिएको
बिभिन्न जडिबुटी बोझो हाम्रो घर वरीपरि सारेमा सजिलै उम्रने गर्छ । धेरैको घरमा बोझो सारिएको पनि होला । औषधीय गुणले भरिपुर्ण बोझोले धेरै रोगबाट बचाउँन सहयोग गर्छ । बोझोको सेवन गर्नाले खोकी सन्चो हुन्छ । त्यस्तै बोझोको सेवनले स्मरणशक्ति पनि बढ्छ ।
तपाईको पेटमा केही समस्या भएमा पनि बोझोले ठिक गर्छ । यसको सेवनले पेटको ग्यास निकाल्न, दिसा खुलाउन, बान्ता गराउन धेरै नै सहयोग पुर्याउछ । यदि तपाईको घाँटी दुखेको छ भने पनि बोझा सेवन गर्नाले ठिक हुन्छ। बोझो सेवनले मानसिक तनाव कम गर्न सहयोग पुर्याउछ ।
बोझोले शरीर वा जोर्नीको दुखाई निको पार्न सहयोग पुर्याउछ । यदि तपाईलाई अनिन्द्राको समस्या छ भने यसको सेबनले निको हुन्छ । यसको सेवनले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउछ । बोझोको सेवनले दम रोगका लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।
सोमबार, आषाढ २९, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
यो साउनमा अद्भूत संयोगः कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव?
७२ घण्टामा आफ्नो फोक्सो आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं…
घाँटी काखी, र कुहिना कालो भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुस छिट्टै गोरो र सफा हुन्छ !
छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ : थाहा पाहुनुहोस्
६ शताब्दीका सुनको सिक्का जमिन खन्दै गर्दा फेला परे पछी